बेसीशहर, कार्तिक ६ गते ।
मर्स्याङदी नदीलाई हामी पवित्र मान्छौं । हिउँ पग्लेर वगेको मर्स्याङदीको जल पवित्र मानेर विभिन्न कार्यमा भगवान र पितृहरुलाई अर्पण गर्दछौं । पानी हाम्रो जीवनमा महत्वपूर्ण छ र यसलाई जीवन पनि भनिन्छ । अझ हिमालबाट झरेको मर्स्याङदी नदीको जलको विशेष महत्व छ । यही मर्स्याङदी नदीको किनारमा ठाउँ ठाउँमा शिवालय मन्दिरहरु छन् । ती मन्दिरहरुमा यही नदीका जल ल्याएर भगवानलाई चढाइन्छ । यही नदीको प्रत्येक घाटमा शुद्ध हुन श्रद्धालुहरु श्रद्धापूर्वक नुहाउँछन् । यसलाई काशी, गंगा, जमुना, कालीगण्डकी जस्ता पवित्र नदीको कोटीमा राखिन्छ ।
मर्स्याङदी नदीको धार्मिक महत्व मात्र छैन । यसको महत्व विशाल छ । हिजोसम्म धार्मिक महत्व मात्र बोकेको यो नदी लमजुङको भाग्य बदल्न सक्ने प्राकृतिक श्रोत पनि हो । लमजुङमा दुईवटा ठूला विद्युत आयोजना यही नदीमा बनेका छन्, अरु बन्ने तरखरमा छन् । यस नदीको महत्वलाई बुझेर अहिले मस्र्याङदी गाउँपालिकाले नदीको सरसफाइमा चासो देखाएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । नदीको पवित्रतालाई जीवित राख्न गाउँपालिकाले सफा मस्र्याङदी अभियान चलाएको हो ।
मर्स्याङदी गाउँपालिकाले अहिले मर्स्याङदी नदीमा फोहोर फाल्न बन्देज लगाएको छ । नदी आसपासका वस्ती, बजारका स्थानीयलाई नदीमा फोहोर फालेमा दण्ड जरिवाना पनि गर्ने भएको छ । यही नदीको किनारको बाटो भएर दैनिक सयौं विदेशी÷स्वदेशी पर्यटक यात्रा गर्छन् । नदी र यस वरपर फोहोर गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकाले सचेतना संगै सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए ।
नदी किनाराका वस्तीमा रहेको होटल रेष्टुरेण्ट, पसल घरहरुबाट निस्कने प्लास्टिक तथा सिसाका बोत्तल, लगायतका फोहोर नदीमा फाल्ने क्रम बढन थालेपछि गाउँपालिका यस अभियानमा तातेको हो । कतिपय स्थानमा शौचालयको ढलसमेत नदीमा मिसाइएको हुन सक्ने अनुमान गरी त्यस्तो कार्य तत्काल बन्न गराउन गाउँपालिकाले सूचना गरेको उपाध्यक्ष होमबहादुर विकले बताए । स्थानीयले जथाभावी फोहर नफालुन भनेर ठाउँठाउँमा डस्टबीन राखिएको छ । गाउँपालिकाको मोटर चल्ने सडक आसपासका क्षेत्रबाट फोहर संकलन गरी प्रशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले गाउँपालिकाका लागि फोहोर उठाउन ट्याक्टर उपलब्ध गराएको छ । भुलभुलेमा फोहरमैला संकलन केन्द्र निर्माण गरि कुहिने फोहरलाई अनिवार्य रुपमा कम्पोष्ट मल बनाउने अभियान चलाएको छ ।
उता मर्स्याङदी गाउँपालिका मर्स्याङदी नदीको सफाइमा जुटिरहँदा यसको विपरित सदरमुकाम समेत रहेको बेसीशहर नगरपालिकाले बेसीशहर बजारको फोहोर मैलालाई त्यही नदीको किनारमा लगेर विसर्जन गर्ने लज्जास्पद काम गरिरहेको छ । बेसीशहर नगरपालिकाले बेसीशहरको झिंगेखोला र मर्स्याङदी नदीको दोभानमा फोहोर फाल्ने गरेको पनि चार बर्ष पुगीसकेको छ । बजारको नजिकै र हजारौं श्रद्धालु भक्तजनको आस्था र विश्वासका धरोहर करपुरेश्वर महादेव मन्दिरको १ सय मिटरको दुरीमा बेसीशहर बजारको फोहोरलाई विसर्जन गरी नगरपालिका हाइसन्चो मानेर ढुक्कले बसेको छ । मानौं यो नै फोहोर विसर्जन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त थलो हो ।
करपुरेश्वर महादेवको मन्दिर नपुग्दै दनाइफाँटको पुछारबाट नदी किनारमा फोहार फालेको तारात्तै देखिन्छ । संगै फोहोरमैलाका दुर्गन्धले नाक थुनेर हिँड्न पर्छ । यसमा स्थानीयलाई बानी परिसकेको छ । तर त्यसतर्फ जाने नयाँ आगन्तुक दुर्गन्ध खप्न नसकेर फर्कने गरेका छन् । बेसीशहर घुम्न आउने र मन्दिरको दर्शन गर्न जानेहरुको झनै विजोग हुने गरेको छ । यस विषयमा करपुरेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण समिति समेत मौन किन बसेको छ ? स्थानीयले बुझ्न सकेका छैनन् ।
अहिले त्यही फाहोरको थुप्रो माथि बेसीशहर नगरपालिकाकै प्रमुख आकर्षक केन्द्रको रुपमा करपुरेश्वर पार्क बनाइँदै छ । साविकका मलामी चौरलाई पार्कको रुपमा विकास गरिँदै गर्दा फोहोरमैलाको दुर्गन्धले काम पार्कमा पुग्नेहरुलाई फर्केरै नजाउँझै बनाउने गर्छ। स्थानीय भुपाल दनाई भन्छन्– “धार्मिक र पर्यटकीय स्थल वरीपरी फोहोर विसर्जन गर्न अब रोक्नुपर्छ । यसका लागि सबै जागरुक हुनुपर्छ ।” उनी भन्छन्– “फोहोर मैलाका कारण मन्दिर पुग्नै धौ धौ छ, पार्कमा पुगेर यसो छेउतिर जानै हुन्न, ह्वास्स दुर्गन्ध आइहाल्छ ।”
नगरपालिकाले सो क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध हुँदाहँदै पनि फोहोर विसर्जन गरिरहेको छ । शुरुमा तत्काल अर्को विकल्न नभएकाले छोटो अवधिका लागि फोहोर फाल्ने र यसका लागि बेसीशहरको दनाइफाँट हुँदै करपुरेश्वर महादेव मन्दिरसम्म सडक पीच गरिदिने, स्थानीयसंग फोहोरमैला संकलन बापतको रकम नलिने र त्यस क्षेत्रमा विभिन्न विकास निर्माणका काम गरिदिने आश्वासन तत्कालीन नगरपालिकाका कर्मचारीले गरेका स्थानीय सम्झन्छन् त्यस अनुसार काम नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।
त्यस स्थानको फोहर बर्षेनी बर्षातमा बाढी आउँदा नदीले बगाउने गरेको छ । कति बगायो लेखाजोखा छैन । पवित्र मस्र्याङदी नदीको किनार, करपुरेश्वर महादेव मन्दिरको छेउ र करपुरेश्वर पार्कको सिधै तल फोहोर फाल्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । मन्दिर, खोला नाला, पार्क जस्ता सम्पदाको संरक्षण सम्बद्र्धनमा जुट्नु पर्ने नगरपालिका उल्टै तीनै सम्पदासम्म जानै नसक्ने गरी दुर्गन्ध फैलाउन उद्यत हुनु आश्चर्यको विषय बनेको छ । मन्दिर नजिकै मस्र्याङदी नदीको बालुवा झिक्दा मन्दिरमा असर गर्छ भनि बालुवाको टेण्डरनै रद्द गर्ने नगरपालिकाले कुन सोचले त्यहाँ फोहोर फालिरहेको होला ? नगरबासीले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
← अलैंचीको अध्ययन गर्न विदेशी व्यावसायी लमजुङमा
चाडपर्वले राष्ट्रिय एकता कायम गर्छन् ः मुख्यमन्त्री गुरूङ →